भ’र्खरै खुल्लामंचमा भोका जनता र प्र’हरी बीच झ’डप ! प्र’हरीले गाडीमा कोचेर खोलामा लगे, रि’सले आ’गो | Public 24Khabar
Home News भ’र्खरै खुल्लामंचमा भोका जनता र प्र’हरी बीच झ’डप ! प्र’हरीले गाडीमा कोचेर...
Previous articleसकियो चि’न्ता विश्वभर खुशीयाली, मानवतालाई उपहार हो यो खो’प, जसले अब बचा’उँछ मा’नव जगतलाई ! ( भिडियो हेर्नुहोस्)
Next articleभर्खरै खुल्लामंचमा भोका जनता र प्रहरी बीच झ’ डप ! प्रहरीले गाडीमा कोचेर खोलामा लगे पछि रि’सले आगो